3000CPH Aluminom mkpọ biya maka ndị ahịa Moscow
Akụkụ 1: 3000CPH aluminum mkpọ biya canning akara ihe igwe nkọwa Model Size Power Qty. mm kw 1 Automatic aluminum nwere ike de-palletizer XD-1 7500*3200*3700 7kw 1set 2 Ọwara ụdị ike washer XG-1 1500*500*2500 0.37kw 1set 3 Monobloc 2 na 1 ụgbọ ala ...
Ngwa 1000L Beer ọhụrụ maka ire ere
A na-eji akụrụngwa brewery 1000L eme ihe na ụlọ ọrụ ebe a na-eme mmanya, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ihe ndị ọzọ. Ọ nwere ike iji ihe akụrụngwa dị iche iche mepụta pale lager, amber lager, dark lager, ale na ihe ndị ọzọ. Dị ka onye ahịa chọrọ, OBeer nwere ike ịmepụta igwe anaghị agba nchara 304 brewhouse, ọla kọpa na ...
1000L na-ebuga ebe a na-emepụta mmanya na Austria
Ndewo onye ọ bụla, taa bụ ụbọchị kwesịrị ime emume. Dị ka Taa, anyị na-ebunye ma na-ebuga akụrụngwa na Austria!! Mgbe ihe dị ka ọnwa 3 gachara, anyị rụchara ihe nrụpụta 1000L na nnyefe a, anyị na onye nwe ya kwurịtara ma gbanwee obere akụkụ n'etiti mmepụta na g ...
Mwepu Fermenter dị njikere ibupu Germany
N'ebe a, ka anyị webata ihe dị iche fermenter, okpukpu abụọ isi fermenter maka idobe okpomọkụ ka mma. N'ọnwa gara aga anyị na-enweta ka si Germany, na ha na-achọ na fermenter bụ okpukpu abụọ isi. Ebe a bụ eserese. ...
site admin na 21-01-11
Ngwa ime ihe maka lita 3000 kwa ụbọchị na Uzbekistan
Sistemụ igwe nri 01 Malt Mill 500-800 kg/h 02 Grist Case 2000L 03 Flex Conveyor 1.5М³/h Brew house 01 Mash tun 1500L 02 Lauter tun 1500L 03 Kettle 1500L 05000E tank mmiri mmiri ọkụ 0450 07 Wort jụrụ okpomọkụ e ...
site admin na 20-09-05
Kedu ka ụlọ ọrụ biya si gbakere? Lelee ụlọ mmanya na-aga n'ihu nke mba ndị a Ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-emeghe otu mgbe, tinyere mgbake nke akụ na ụba abalị na ọganihu akụ na ụba nke ụlọ ahịa okporo ámá, ụlọ b ...
Azụ ahịa biya nka n'okpuru ọrịa na usoro mgbochi nke ụlọ ọrụ anyị na-eme kemgbe ọnwa Jenụwarị nke afọ a, ọrịa a abawanyela ma mechie ụlọ ahịa, ụlọ mmanya, ụlọ nri na ebe ọha. Ka ọ dị ugbu a, epid ...
Ewepụtala webụsaịtị ọhụrụ Shandong Obeer nke ọma!
Ewepụtala webụsaịtị ọhụrụ Shandong Obeer nke ọma! Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Shandong OBeer Machinery Equipment Co., Ltd. ka onye ọrụ ọ bụla mara ụlọ ọrụ Obeer, ugbu a ụlọ ọrụ anyị ewepụtala weebụsaịtị ọhụrụ wee gosi gị ngwaahịa ọhụrụ; Wa...